စန္ဒာဒီပ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1990-05-31) ၃၁ မေ၊ ၁၉၉၀ (အသက် ၃၁)
ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ
အရှင်စန္ဒာဒီပ (၃၁ မေ ၁၉၉၀ မွေးဖွား) သည် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းစာရေးဆရာတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ အရှင်စန္ဒာဒီပကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းရွာ၊ ခမည်းတော် ဦးကျော်ဌေး + မယ်တော် ဒေါ်စိန်အေးတို့မှ ၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၅၂ ခုနှစ်၊ နယုံလဆန်း ၈ ရက် (အင်္ဂါနေ့) တွင် ဖွားမြင်၍ မွေးချင်း ၈ ယောက်ရှိရာတွင် သတ္တမမြောက်သား ဖြစ်သည်။
၃ အောင်မြင်တော်မူခဲ့သော စာမေးပွဲများ
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၂ ခုနှစ်၊ နတ္တော်လဆန်း (၁၅)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် သုဓမ္မဝတီပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာစာရထံတွင် ရှင်သာမဏေအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း (၁၃)ရက် (ကြာသာပတေးနေ့)တွင် သုဓမ္မဝတီပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာစာရကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုလျက် မြောက်ကျင်းရွာ ရွှေမြင်သာကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ ခဏ္ဍသိမ်တွင် ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ငယ်ဆရာအရင်းဖြစ်တော်မူသော သုဓမ္မဝတီပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာစာရ၏အထံတော်တွင် ကကြီးမှအစ ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး၊ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တရာဇဓမ္မာဘိဝံသ(မဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)၊ မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ဇော်ဂျီလမ်း၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိက္ခိန္ဒြိယာဘိဝံသ (သ-စ-အ) ထံတွင်လည်းကောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ ဆင်ဖြူစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တခေမာစာရ (ဒွိပိဋကဓရ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ မဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ)နှင့် အနုနာယကစာချဆရာတော်များအထံတော်တွင် ပရိယတ္တိစာပေများကို လေ့လာသင်ယူ ဆည်းပူးခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ အမှတ် (၃)ဝိုင်း၊ ပါရမီအင်္ဂလိပ်သင်တန်းကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တအဂ္ဂသေနနှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့၊ ကေလနိယတက္ကသိုလ်မှ Ven. Prof. M. Wimalagnana, Snr. Lec. Ven. Dr. Wadinagala Pannaloka, Ven. Prof. R. Padmasiri, Snr. Lec. Dr. A. Welitota, Prof. W. Priyadarshana, Dr. Yu, Nam-Hyun, Dr. Prinsi Peiris တို့ထံတွင်လည်းကောင်း ဘာသန္တရစာပေများကို သင်ယူခဲ့သည်။
၁၃၇၉ ခုနှစ်တွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့၊ ကေလနိယတက္ကသိုလ် (post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies) Master of Arts Degree Course ကို ဖြေဆိုအောင်မြင်သောကြောင့် MA-Buddhism(Srilanka) ဘွဲ့ကို ဆပ်ကပ်ခံခဲ့ရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ရန်ကုန်)တွင် ဆောင်းပါး တတိယဆု၊
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ငါတို့သည် Save The Aged ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Save The Aged (သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း)တွင် ကဗျာ တတိယဆု ရရှိခဲ့သည်။
အရှင်စန္ဒာဒီပ သည် ကြေးမုံ သတင်းစာ၊ ပြည်ချစ်သားဂျာနယ်၊ စံတော်ချိန်သတင်းစာ၊ မြန်မာတိုင်း(မ်)သတင်းစာ၊ The Family life မဂ္ဂဇင်း၊ ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ ပြုံးစရာမဂ္ဂဇင်း၊ ရတနာပုံသတင်းစာ စသည်တို့တွင် စာပေများ ရေးသားခဲ့သည်။
ယခုအခါ အရှင်စန္ဒာဒီပသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့၊ အမှတ် (၂၈၄)၊ ဒေမတဂေါတလမ်း၊ မကုဋရာမမြန်မာကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်ပြီး M-phil တန်းကို သင်ကြား၍ ဘာသန္တရစာပေများကို ဆက်လက်ဆည်းပူးလျက် ရှိသည်။
↑ အရှင်စန္ဒာဒီပ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စန္ဒာဒီပ&oldid=639321" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။